Madaxweyne Farmaajo & Madaxda Dowlad goboleedyada oo qodobo ku heshiiyay - Awdinle Online
Madaxweyne Farmaajo & Madaxda Dowlad goboleedyada oo qodobo ku heshiiyay
Kulamo looga hadlayo Arrimaha dhameystirka doorashooyinka ayaa waxaa Villa Soomaaliya ku yeeshay Madaxweyne Farmaajo, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Wararka lagalay kulamada ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxda ay isku raaceen in la dhiso ilaa Saddex Guddi oo ka Shaqeynaya doorashada Barlamaanka, kuwaas oo kala ah,Guddiga doorashada ee Heer Federaal & Heer Dowlad Goboleed & Guddiga xalinta khilaafkaadka.
Waxaa sidoo kale wararku sheegayaan in Madaxda ay isku raaceen waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal,waxaana doorasahda ugu horeysay ay noqoneysaa tan Aqalka sare, iyaga oo doorashooyinka ay dhici doonaan dhamaadka bishan October illaa horaanta Bisha November ee isla sanadkaan 2020.
Kulamada looga hadlayo Arrimaha doorashooyinka dalka ayaa waxaa ay noqon doonaan kuwa joogta ah, iyada oo sidoo kale ay dhici doonaan shirar wadatashi ah.
Previous articleHaweenay qarax isku soo xirtay oo dishay sarkaal ka tirsan NISA!
Next articleJubbaland oo AMISOM ka dalbatay hal arrin